PLA ဖလား နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ PLA ဖလား ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
SHANG SHIEN CHENG INDUSTRY CO., LTD. အဓိကထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည် Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်အတွက်အထူးပြု PLA ဖလား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ OEM / နှစ်ဖွဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်စာနာန်ဆောင်မှုမှအကျိုးခံစားရဖို့, today.We စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဖန်တီးရန်နှင့် client အားလုံးနှင့်အတူအောင်မြင်မှုမျှဝေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ပိုပြီးစတိုင်များကျေးဇူးပြုပြီးချင်တယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခုချက်ချင်း!
Polylactic acid ကို bio မှ lactic acid ၏ polymerization ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်-အခြေခံပစ္စည်းများ(ပီလောပီနံကဲ့သို့,ကြံ,cellulose ကောက်ရိုး,စသည်တို့.)microbial အချဉ်ဖောက်ခြင်းမှတဆင့်,ရေနံအရင်းအမြစ်များအပေါ်မမူတည်ပါ;အသုံးပြုပြီးနောက်,၎င်းသည်သဘာဝပိုးမွှားများ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ရှိနိုင်သည်,ရေ,အက်ဆစ်,အယ်ကာလီ,စသည်တို့.ပြိုကွဲပျက်စီးမှုသည်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ရေကိုထုတ်လုပ်သည်,အပင်အား photosynthesis အတွက်ဆက်လက်အသုံးပြုသည်.ရေနံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ-အခြေခံပိုလီမာများ,PLA သည် non ကဲ့သို့သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်-အဆိပ်,မဟုတ်-နာကျင်စေသော,မြင့်မားသောခွန်အား,biodegradability,နှင့် biocompatibility.
အကောင်းဆုံး PLA ဖလား ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် PLA ဖလား မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ